Vula iifayile zakho ezixineneyo kwi-Android kunye neWinZip | I-Androidsis
I-WinZip yenye yezo zicelo ezaziwa ngumntu wonke weWindows, kodwa engonwabanga kukuthandwa kwayo kwiidesktops kunye nokwaziswa kwayo kutshanje kwi-iOS, apho ngendlela esele bekwazile ukubhalisa ngaphezulu kokukhutshelwa kwesigidi esinye, iWinZip Computing igqibe kwelokusungula idumile isicelo sokucinezelwa kwefayile en Google Play.
Ngale ndlela, i-WinZip ye-Android isizisela ithuba lokulawula iifayile ezixineneyo kwifowuni yakho okanye ithebhulethi. Nangona ukusebenza kunqongophele ngokuthelekiswa nohlobo lwe desktop kwaye, umzekelo, ayisiniki naluphi na ukhetho lokuba sikwazi ukucofa umxholo, ubuncinci iyasivumela vula nayiphi na ifayile yeZIP ebesikade siyigcina kwimemori yethu ye-SD okanye sayikhuphela kwiphepha lewebhu kwisikhangeli okanye i-imeyile encanyathiselweyo.
Isicelo sixhasa iifayile ezifihliweyo ngegama eligqithisiweyo kwaye ikwabonakaliswa ngokubandakanya ifayile ye inkqubo yokubonisa apho sinokubona umxholo wee-zip zethu ukusuka kunxibelelwano olufanayo. Eli nqaku lixhasa iintlobo ngeentlobo zeefomathi kunye neefayile, kubandakanya imifanekiso, iifayile zombhalo, iifayile zewebhu kunye neefayile zeapap. Ukongeza, iWinZip iyadityaniswa nezinye izicelo zomntu wesithathu ukuze zikwazi ukuvula amaxwebhu eOfisi kunye nePDF.
Okwangoku i-WinZip ye-Android ikwiNgesi kuphela, kwaye nangona kuyinyani ukuba ngokwemiba yeempawu esisakutyala kakhulu, kufuneka sikhumbule ukuba yinguqulelo yokuqala kwaye ngokuqinisekileyo kwiinguqulelo ezizayo siza kuqala ukubona imisebenzi emininzi. kunye nophuculo. Okwangoku, ukuba ufuna ukujonga, ngoku no ku khuphela WinZip ukusuka kuGoogle Play; Kufuneka kuqatshelwe ukuba iyahambelana neenguqulelo ze-Android 2.1, 2.2, 2.3, 3.x kunye 4.x.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Sala kakuhle kwiNtengiso ye-Android, molo kuGoogle Play
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-WinZip isungula kwi-Android